Iqiniso Langempela Ngomsele Wakho Wokuthengisa | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 17, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UJenn Lisak Golding
Okokuqala, siyabathanda abaxhasi bethu ku I-PaperShare, abanike amandla amandla wethu we- umtapo wolwazi nawo wonke amaphepha amhlophe abaxhasi bethu nama-ebook. Ngibe nokuqhuma ngisebenza kule infographic nabo.
Ngesikhathi sale nqubo, sabheka ukuthi kungani ukumaketha okuqukethwe kungasasona isiteshi esisodwa sokumaketha; kuyisisekelo esinika amandla yonke imizamo yokuthengisa. Kungani, ungabuza? Yebo, lesi sibalo singakumangaza noma singakumangazi. Ngokuvumelana ne Izinqumo zikaSirius:
Amakhasimende e-B2B axhumana nabathengisi abathengisayo kuphela ngemuva kokuthi i-70% yesinqumo sokuthenga isithathiwe.
Ake sicabange ngalokho okomzuzu. Lokho kusho ukuthi ngaphambi kokuthi noma yiliphi ithemba elizimisele ukukhuluma nethimba lakho lokuthengisa, bayacwaninga, balande futhi bahlanganyele nokuqukethwe kwakho ngandlela thile ukuze benze isinqumo sokuthi ngabe ungumuntu ozobhapathizwa osebenzayo. Kuhle kakhulu lokho!
Enye inkinga ukuthi, ngisho nayo yonke i- analytics namathuluzi atholakalayo namuhla, asikatholi ukubonakala okugcwele emizamweni yethu ngoba indlela yokuguqula imvamisa ayicaci. Ngenkathi othile kungenzeka ukuthi wafika walanda iphepha lakho elimhlophe, bafike kanjani lapho? Bebengabona isikhangiso kwesinye isayithi, bese bachofoza ukufika kuwebhusayithi yakho, bese behlaselwa. Emasontweni amabili kamuva, banquma ukuqala ukukulandela kwezenhlalo. Ngemuva kwalokho, ngemuva kwenyanga, banquma ekugcineni ukulanda elinye lamaphepha akho amhlophe. Lapho ubucabanga ukuthi beza esizeni sakho ngqo, empeleni, bakuthole cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule kusuka esikhangisweni. Bekungeke yini kube ngcono ukube ububonakala ungene kuyo yonke le ndlela esikhundleni sokuthi bamane balande iphepha elimhlophe?
Sidinga lokho kubonakala kwabantu abahlala kulawo makhasi. Sidinga ukubonakala ukuze sikwazi ukuthatha izinqumo ezingcono. Futhi sidinga umlando wamathemba ukuze sikwazi ukuhambisana nokuqukethwe kuwo.
Bheka le infographic esabekayo evela ku-PaperShare, futhi uqiniseke ukuthi uzihlolela izidingo zokusabalalisa okuqukethwe!
Tags: umtapo wokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweebooksumtapo wolwaziI-Marketing Infographicsukwabiwa kwephephaizethulowhitepapers